माईती गएर तीज मान्ने सिताको धोको अधुरै र’ह्यो: रह’स्य’म’य मृ’त्यु,सगैं सुतेका श्रीमानले किन थाहा पाएनन ?
बुटवल । हिन्दू नारीहरुका सामू तीजको र-म-झम भित्रिएको बेला रुपन्देहीमा एउटी चेलीको निकै र-हस्य-मय मृ-त्यु घ-टना बाहिर आएको छ । दुई वर्ष अघिमात्र वि-वाह बन्धनमा बाँधिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा-८ मणिग्रामस्थित ४ नम्बर टोल माइती घर भएकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा र-ह-स्यम-य मृ-त्यु भएको घ-टना सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त नगरपालिका-५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा र-ह-स्य-मय मृ-त्यु भएको घ-टना मंगलबार माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् । भदौ ६ गते तीजसमेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे । उनले श्रीमानको ब-चन हा-र्न नसकी उनी घर फर्किइन् ।
उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन । अर्काे दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मु-हा-र रn-क्ताम्मे अवस्थामा सीताको मृ-त्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु-आमा बे -हो-स भई ढ-ले ।
प्रत्यक्षदर्शी माइतीजनका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठामा मु-खबाट र -ग -त बगेको, ग -लामा चु -ङ्गीले क-सि-एको र भुँ-ईमा ल -डेको अवस्थामा भदौ २० गते विहान मृ-त फेला परेकी थिईन् ।
मृतक सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको ह -त्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जा-हेरी दिएको तर प्रहरीले कि-टा-नी जा-हेरी लिन नमानेपछि त्यसको वि-रो-धमा सयौं माईतीजनले आज बुधबार दिउँसो त्यस प्रहरी कार्यालयमा ध-र्ना दिएका छन् ।
टीकाले पाल्पा तानसेनको होलाङदी जाने बाटोमा ‘दि दरबार कटेज एण्ड रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले त्यहीँबाट श्रीमतीलाई तिमी घर जाँदै गर्नु म साँझ आउँछु भनेर घर पठाएका थिए । त्यसपछि उनी भदौ १९ गते दिउँसो करिब २ बजेको समयमा माइत बाट घर हिडेकी थिइन् ।
माइतीजनले भने सीताको ह -त्या यो-ज-नाबद्ध गरिएको भन्दै न्या-यको खोजीमा छ । त्यसैदिन साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सिताका श्रीमान ससुराली आउँछन् र मेरो घरमा आई तपाईकी छोरी अब वि-ता-रा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउछु भनी ध -म्की-पूर्ण कुरा गरी अरु केही नबोली अगाडीको ढोका जो-डले लगाउँदै हुँ-ईकि-दै त्यहाँबाट हिँडे हुन् ।
मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँग–सगै छ । उनले म -दि -रा पि-एको आभास हुन्थ्यो । त्यसलगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हाने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हान्दा पनि फोन उठेन । अर्को दिन विहान ५ बजेर २५ मिनेट जाँदा उनका श्रीमानको ८ सेकेन्ड मात्रै मिसकल आयो ।
हिजो जाँ -ड र –क्सी पिएर केहीँ बोलिकी भनेर एस्क्यु -ज गर्न होला भनेर मैले कल ब्याग गरिन । त्यसलगत्तै भाईलाई फोन आएछ । उनले मेरो घर आउनुस् भन्नुको सट्टा मेरो घरमा जानु भनेछन् । के के भयो र भनेर सोध्दा केही भएको छैन एउटा काम छ भनेछन् । सासु ससुरालाई फोन गरेर पनि मेरो घर छिट्टै जानुस् भने छन् ।
कारण सोध्दा केहीँ भनेर मात्र आइहाल्नु पर्ने भयो । अति जरुरी काम पर्यो भने छन् । त्यसपछि मृ -तककी आमा अर्थात् मेरो दिदी पुनम भण्डारी, भाईहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेल पहिला त्यस घरमा पुगेछन् । म पछि मात्रै गएको हुँ । उनीहरुले त्यहाँ पुगेर हामीहरुलाई किन हतार हतार बोलाउनु भएको हो ? मेरी छोरी कता छिन् भनि सोध्दा घरमा भएका सासु ससुराले कुनै जवाफै दिएनछन् ।
त्यति बेलासम्म ज्वाँई घरमा थिएनन् । त्यसको करिव २० मिनेट पछि घरमा ज्वाँई बाहिरबाट घरमा आइ तपाईंहरुको छोरीलाई मा -र्नमा प्रमुख हात यसैको छ भनी उनको दिदी (जो चितवनबाट माइत आएकी थिईन् विष्णु पौडेल) लाई औँला ठ -ड्या -उँदै क-रा-उन थाले । त्यसपछि मृ -तका बाबु–आमा छोरी जीवित छैनन् भन्ने ठानेर बे -हो -स भई त्यही ढ -लेछन् ।
साथमा गएका सालाहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेलले घरभित्र गई हेर्दा अ -ट्या -च कोठाबाट वाथरुममा प-स्ने ढोकामाथि का -टि-एको चु -ङ्गी झु -ण्डि -इरहे -को, सीतालाई चु -ङ्गीले क -सेको अवस्थाम फेला पारेका थिए । घटना राति २ बजे देखि ५ बजे भित्रको भएको देखिन्छ ।
एउटै कोठामा सुतेकी श्रीमती सीता यदि आ -त्मा -ह -त्या गर्न लागेको भए श्रीमान चाँ -हीले ब-चाउने प्रयास गर्न पर्ने कि नपर्ने ? बचाउनकै लागि डो -री पा -सो का -टि -एको हो भने श्रीमतीको ज्या -न गइसके पछि परिवारका सदस्य र टोल छिमेकलाई खबर गर्ने कि घर छाडेर भा -ग्ने ?
बिहान ५ बजे पछिको कलले नै स्पष्ट पार्छ कि उनी त्यति बेलैदेखि घरबाट बाहिर निस्की सकेका छन् घ -ट -नाको अबेरसम्म पनि प्रहरीलाई स्वयम् श्रीमान वा परिवारका सदस्यहरुले प्रहरीलाई खबर गर्न किन चाहेनन् र माईतीले नै प्रहरीलाई सूचित गर्नु पर्यो ? ससुरालीमा पुगेर अघिल्लो साँझ दिईएको ध- म्की स्याल कराउनु बाख्रो ह -राउनु जस्तै हो ?
उनले भदौ ६ गते नै तानसेनबाट गाडीमा बोकेर श्रीमतिलाई तिज मान्ने गरि माईतीमा छाड्न आए पछि फेरी एक्कासी किन बोलाए त्यस साँझ ? कतै यो -जनाबद्ध त थिएन ? झु -ण्डि – एर मृ -त्यु हुने मानिसहरुको प्रा -य मु -खबाट र -ग -त बगेको नदेखेको जानकारहरु बताउँछन् । कतै माथील्लो द -वा -व त छैन ? माइतीजनले यस्तो आ-शं-का गरेका छन् । श्रोतका अनुसार आ -रो -पी ज्वाँईका एक जना आफन्त नेपाल प्रहरीको माथील्लो पोष्टमा रहेका छन् । आ -रो -पि -त परिवार निकै पैसावाला पनि हुन् ।
माइतीजन भन्छन्- दुई वर्ष अघि मागी विवाह गरियो । स्टि -ल बडि भएको हेर्दा उमेर पुगेजस्तो नलाग्ने, केटा क-न्य नै होला भन्ने ठानियो । तर पछि बुझ्दै जाँदा उनले पहिला नै विवाह गरेका रहेछन् । पहिलाकीसँग स-म्ब-न्धविच्छे-द गरेर यता अविवाहित हुँ भन्दै झु-क्का-एर २५ वर्षकी हाम्री चेलीलाई ४० बर्ष नाघेका उनले झु-क्का-एर विवाह गरेको थाह पाइयो ।
मृ-त-क सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारी भने भ-क्का-निँ-दै रुँदै भन्छन्–‘मेरी छोरीलाई मा -रेकै हुन् । उसले आमासँग भन्ने गर्थि रे–‘साँझ र -क्सीले टि -ल परेर आएपछि बसि खानु हुन्न आमा । मृ -त -क सीताको परिवार गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ५ वस्तु का हुन् । उनीहरु रुपन्देहीमा बसाइसराई गरे पनि आवत जावत गरिरहेका थिए ।